Maleeshiyo ka tirsan Al shabaab oo lagu dilay Deegaanka Far Libaax | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Maleeshiyo ka tirsan Al shabaab oo lagu dilay Deegaanka Far Libaax
Maleeshiyo ka tirsan Al shabaab oo lagu dilay Deegaanka Far Libaax
Muqdisho (SONNA) Wararka naga soo gaaraya Deegaanka Far Libaax ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in halkaasi Jab xoog leh lagu gaasriiyay Maleeshiyada Argagaxisada Al shabaab oo dagaal xoogan kala kulmay dadka deegaanka.
Guddoomiye ku xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Deegaanka Far Libaax Cawaale Isaaq Jirre oo wareysi siiyay Wakaalada Wararka SONNA ayaa sheegay in dagaalka uu ka dhacay Meel qiyaasta 25-km u jirta magaalada Beledweyne.
Dagaalka ayaa bilowda sida Guddoomiye ku xigeenka uu sheegay ka dib markii Argagaxisada Al shabaab ay isku dayeen inay Jidgooyooyin dhigtaan meel kala barta Beledweyne iyo Far Libaax, ka dibna ay dagaal xoogan la galeen dadka deegaanka.
10 ka mid ah Maleeshiyadii Al shabaab ee dagaalka soo qaaday ayaa halkaasi lagu dilay, waxaana laga gubay gawaari, iyadoo kuwa kalena ay halkaasi isaga carareen.
Hal qof oo rayid ah ayaa ku geeriyooday dagaalka, waxaana hada degan xaalada Deegaanka Far Libaax iyo nawaaxigeeda, iyadoo dadka deegaanka ee Al shabaab la dagaalamay ay dowlada ka codsadeen inay taageerto si ay haraaga Maleeshiyada kaga saaraan meelaha ay ku dhuumaaleysanayaan.
Previous articleBooqashada Ra’iisul Wasaaraha Bangladesh ee Qaxootiga Rohingya